Ndinogona here kuwana nzira yekuvandudza imwe nheyo yezvinyorwa zvewebhu?
Chikamu chinonyanya kukosha chekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvakurudza kwekutsvaga ndekutsvaga hukuru hwekutsvaga kwewebsite yako. Keyword ranking ndiyo iyo iwe webhusaiti yako inotarirwa muGoogle kuitira zvakakosha pamusika wako wekutsvaga nguva yekutsvaga. Inobatsira zvikuru pamugwagwa wako uye shure kwekutendeuka. Sezvinoratidzirwa zvinoratidza zvinopfuura 70% zvevashandi vekutsvaga injini tsvaga pane mawebsite akaiswa peji rekutanga reSERP. Icho chinoreva kuti yakakwirira iwe yepamusoro, zviri nani pane iwe. Kune zvose zvakabhadharwa nekugadzirwa kwehupenyu, izwi rakakosha remashoko rinogona kuwanikwa kuburikidza nekushandisa keyword kutsvakurudza zvishandiso uye zvakasiyana-siyana zvekutsvaga injini yekugadzirisa.
Nhamo, SEO haisi kutipa nguva dzose zvatinotarisira. Tsvaga injini dzinogona kutarisa peji yako kwezwi rinoshandiswa zvakasiyana pane iyo yatinoda imwe PageRank. Saka, regai tikurukure zvaunogona kuzviita nyaya iyi uye kuti unogona sei kuvandudza kusarudzwa kwe peji nekuda kwemashoko aunoda.
Ndedzipi nzira dzandinofanira kuwana kuti ndivandudze hutano hwemashoko ewebsite yangu?
Chinhu chokutanga chaunoda kufunga nezvacho ndechekuti chiratidzo cheGoogle chinogamuchira kubva pawebsite yako. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti Google inowana zviratidzo chete izvo zvinogona kukuunza traffic. Pane mutsara wakapetwa pakati pehutano hwakanaka uye huwandu hwekugadzirisa nekushandiswa kwehutambo hwekutsvaga hutsotsi. Kunyanya kugadzirisa kunogona kukonzera kutengesa kweGoogle uye kuderedza nzvimbo yako yekutsvaga nzvimbo.
Saka, kuti uwedzere peji rako rewebhu kuti rive rakakosha pamusika wako wekutengesa niche mushure mekukanganisa kwepamusoro-soro, unoda kutevera matanho aya.
Mutsara wekutanga wekutsvaga mazwi
zvinoda kutora. Ichi chinokosha chichakupa mukana wekuyera mararamiro emunguva yemberi. Kuti uite nyore izvi, iwe unogona kushandisa mamwe mashizha emhando yepamusoro seSemalt Auto SEO kana Google Keyword Planner. Nekubatsirwa kwemashandisi aya, unogona kutarisa nzvimbo yako yekutsvaga zuva rega rega.
Kuti uwane izwi rako rekushanduka, shandisa izwi rako rekutsvaga uye rakatsvaga kutsvaga muGoogle Keyword Planner kana Semalt Auto SEO tool. Zvose zviri zviviri izvi zvingakupa kuchinja kwakakodzera kweshoko rekutanga rakasarudzwa uye kukupa mukukwikwidza kuongororwa kune rimwe nerimwe remashoko iwayo. Ndichakupa pfungwa yakajeka yezwi rako rekukwikwidzana nekukosha. Pano nhanho inotevera, unofanirwa kuisa izwi rako rakakosha muGoogle search box kuti uwane zvinotaurwa neGoogle t-tailed key phrases. Uyezve, unofanirwa kutarisa kuti domains inowanikwa papeji yekutanga yeSERP uye ndeapi mazano ekuti "zvakatsvakurudza kutsvaga mazwi" iwe.
Tsvakurudzo iyi yekutanga yekutanga ichakuratidza kana zvaunotarisira zvaiva zvakarurama kana kwete. Nemuenzaniso, kana shoko rekutanga raunoda kutarisa rakakwikwidzana iwe unofanira kuritora zvakare sezvo pane zvishoma kuti iwe uchakwanisa kurova vatengesi vako vemakwikwi nepamusoro pemotokari.
Kuti usimbise kana udzokezve zvaunotarisira, nyatsoongorora mhinduro dze TOP10 pane peji rekutanga reSERP. Iwe unofanirwa kutarisa kana mazita aya ane kodzero uye kuti yakareba kwenguva yakareba sei Source .